अस्पतालबाट निस्किएर ट्रम्प जब समर्थकहरू सामुन्ने पुगे... - Nepal Samaj
अस्पतालबाट निस्किएर ट्रम्प जब समर्थकहरू सामुन्ने पुगे…
उनले भनेका छन्, ‘यो साँच्चिकै विद्यालय जस्तो छ । यो किताबहरूको विद्यालय होइन्। मैले त्यो पाएँ र बुझेँ। साँच्चिकै चाखलाग्दो यसबारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु।’ उनले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका निम्ति अपनाउनु पर्ने सावधानीको बेवास्ता गरेको भनि निकै आलोचना हुने गरेको थियो ।
उनले सामाजिक दूरी नराखेको र मास्क नलगाएको तस्बिरहरू देखिने गरेका थिए । ट्रम्प सङ्क्रमित भएको कुरा शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको थियो जसले उनको चुनावी अभियानलाई अन्योलमा पारिदिएको थियो । उनले नोभेम्बर ३ तारिखमा हुने चुनावमा डेमोक्र्याटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडनको सामना गर्नेछन् ।
वाल्टर रीड नेशनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टर पत्रकार सम्मेलनमा डा. कोन्लीले ट्रम्पलाई कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएयता दुई पटक अक्सिजनको मात्रा तल झरेको बताएका थिए । उनका अनुसार पहिलो पटक ह्वाइट हाउसमै त्यसो भएको थियो, जब राष्ट्रपतिलाई उच्च ज्वरो आएको थियो ।
त्यसबेला उनको अक्सिजनको मात्रा ९४ प्रतिशतमा झरेको थियो। जबकी स्वस्थ मान्छेमा त्यो ९५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी हुन्छ । उनले राष्ट्रपतिलाई करिब एक घन्टा अतिरिक्त अक्सिजन दिइएको र त्यसपछि साँझ वाल्टर रीड लगिएको जानकारी दिए । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक रूपमा समाचार आइसकेका थिए र डा. कोन्लीले शनिवार बिभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
दोस्रो पटक शनिवार अक्सिजनको मात्रा ९३ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि उनलाई प्रश्न गरियो । तर राष्ट्रपतिलाई अक्सिजन दिए(नदिएकोबारे उनले केहि बताएनन् ।
तर ’त्यसो गरिएको भए त्यो निकै सीमित भएको’ जवाफ दिए । उनले चिकित्सकहरूको समूहले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई डेक्सामेथासोन दिने निर्णय गरेको बताए । अध्ययनहरूमा उक्त औषधी अस्पताल भर्ना भएका कोभिड १९ का गम्भीर बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन दिने गरेको देखिएको छ ।
अमेरिकामा अश्वेत युवालाई गोली हान्ने प्रहरी अधिकारी पक्राउ
भारतमा देशव्यापी लकडाउन नगरिने